Posted by Tranquillus | May 4, 2018 | vokatra
Na noho ny tsy fisian'ny toerana na safidy, dia maro kokoa ny orinasa misafidy toerana malalaka ho an'ny mpiasany.
Fifanakalozana mora kokoa na fifampiresahana tsara kokoa amin'ny rakitra, raha manome vahaolana maro ity vahaolana ity dia mety ho lasa raiki-tampisaka ho an'ireo izay manana olana amin'ny fifantohana izany.
Mampalahelo fa tsy voatery hifidy foana isika, ka tsy maintsy ampifanarahana amin'izany isika.
Aza misalasala miresaka momba izay manelingelina anao:
Alohan'ny hiresahanao momba ny asa dia zava-dehibe ny miresaka amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminao momba ny toerana malalaka eo amin'ny fahazarana kelinao.
Ilaina ihany koa ny mametraka ny teny eo amin'izay mampanahy anao, na ny fihetsika na ny ticus de ny mpiara-miasa aminao.
Ambonin'ny zavatra rehetra, aza miandry, satria raha miresaka momba azy ianao raha tsy mipoitra dia tsy mety ny feony.
Manamboara sehatra manokana:
Na dia misokatra aza ny birao, dia afaka manangana faritra manokana manokana ianao.
Ny singa sasany amin'ny famolavolana na ny sarin'ny zanakao dia hanampy anao hamorona bubble kely iray, tonga lafatra amin'ny asa atao eny amin'ny toerana malalaka.
Tafio ny tenanao amin'ny asa izay mitaky vahaolana:
Ny asa sasantsasany dia mety mitaky fifantohana, raha toa ka manana fahafahana ny hitokana ny tenanao ianao, dia aza misalasala.
Ho mora kokoa izany raha miasa ianao laptop-laptop na takelaka ary raha toa ny efitrano nisy ny efitrano nisy anao manokana hanamora ny fitokana.
Raha tsy izany, dia afaka mampiasa efitrano fivoriana ianao na ny biraon'ny mpiara-miasa iray tsy misy.
Ampiasao ny sofina mba hifantohana kokoa:
Raha tsy manana fahafahana handao ny hafatrao ianao mba hitokana ny tenanao, dia tsy misy tsara kokoa noho ny kofehy na fitaovam-piadiana.
Ankoatra izany, ny fihainoana mozika mandritra ny asa dia hanampy anao hifantoka kokoa.
Aza hadinoina ny mihaino ny peratra amin'ny telefaona raha tokony ho azo tratrarina ianao.
Ary na dia eo aza ny tononkira sy ny mozika dia manakana anao tsy hiasa tsara ny tabataba manodidina anao, ny fandefasana farany dia ny sofina.
Mandritra ny ora maromaro:
Ny orinasam-pandraharahana sasany dia manome fotoana ho an'ny mpiasany. Raha izany no raharaha ao amin'ny orinasanao, ankafizo izany.
Afaka manomboka amin'ny maraina ianao na miasa any aoriana amin'ny hariva. Ny tanjona dia ny miasa rehefa misy olona vitsy kokoa noho izany ary noho izany rehefa mangina.
Raha tsy mety izany, dia aza misalasala miresaka amin'ny talen'ny olombelona ianao. Azo antoka fa ho vitany ny mandamina ny fotoana fiasanao mba hahafahanao miasa amim-pahombiazana amin'ny toerana malalaka.
Ahoana ny fomba fiasa amin'ny sehatra malalaka? January 16th, 2020Tranquillus
Teo alohaIreo fahaiza-manao manan-danja hivoatra amin'ny automatisation office
manarakaToeram-piasana mampidi-doza: ahoana no hivoahana?